Antananarivo, 23 jona 2020 - Nisy fifanarahana ara-bola natao sonia ny 25 mey teo amin'ny Agence Française de Developpement (AFD) sy ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana ho an'ny ankizy (UNICEF) eto Madagasikara ho fanampiana ny kitapom-bola iombonana ho an'ny sehatry ny fanabeazana.
Izy io no fifanarahana ankapobeny voalohany mitovy karazana aminy, mba hahazoana vokatra haingana sy hiatrehana fanamby maro isankarazany eo amin'ny sehatry ny fanabeazana.
Io fifanarahana io dia mikasika ny fametrahana rafitra fanampiana ara-teknika izay entina manampy sy manamafy ny fahaizan'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa. Ireo masoivoho roa tonta ireo dia hanome famatsiam-bola izay mitotaly $ 3,9 tapitrisa ary koa hanolotra ny fahaizany ho an'io rafitra vaovao io. Ekipa iray ahitana manam-pahaizana no hanampy amin’ny fanombohana sy fampandehanana io kitapom-bola iombonana io mandritra ny telo taona voalohany.
Ity fifanarahana ity dia vokatr’ireo dinika isankarazany nifanaovan’ireo mpiara-miombon'antoka ara-teknika sy ara-bola maro niaraka tamin’ny governemanta Malagasy, mba hananganana rafitra fitantanam-bola iraisana ho fanohanana ny sehatry ny fanabeazana. Marihina fa ny AFD sy ny UNICEF dia efa niara-niasa nandritra ny taona maro tany amin'ny firenena maromaro teo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Misy mpiara-miombon'antoka hafa ihany koa naneho ny fahavononany ary handray anjara manomboka amin’ny taona 2021.
Ho an'i Madagasikara, io famatsiam-bola io dia mameno ny tetibolam-panjakana hiantohana ny fampiharana ny politika isan-tsehatra. Ireo vokatra lehibe andrasana amin'ity fifanarahana ankapobeny ity dia mifandraika amin'ny fampiofanana ny mpampianatra ho matihanina, fanomezana loharanom-pahalalana, fanatsarana ny tolotra itsinjaram-pahefana sy ny fiasan'ireo ivotoerana fanabeazana, ary ny fampihenana ny tsy fitoviana eo amin'ireo faritra sy ireo mpianatra.
Nisy ny fifanarahana ara-bola natao sonia teo amin'ny AFD sy ny UNICEF Madagascar ho fanohanana ny kitapom-bola iraisana ho an'ny sehatry ny fanabeazana, mba hahazoana vokatra haingana sy entina miatrika ireo fanamby isankarazany eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana rafitra fanohanana ara-teknika izay hanampy sy hanamafy ny fahaiza-manaon'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa.